Iimidlalo ezi-15 eziSimahla zeMbaleki kaMdyarho | Izikhokelo ze-Android
UManuel Ramirez | 10/12/2019 11:19 | Imidlalo ye-Android
Los Eyona midlalo mihle yokubaleka ye-Android Banokubandakanya iintlobo ezahlukeneyo zezihloko ezisuka kweyona arcade inkulu ziye kwabo batsalela ngaphandle ngokuthe ngqo Zonke iintlobo zemidlalo ezisibeka emva kwevili lesithuthi eliza kusivumela ukuba sifikelele kwinjongo phambi kwabanye.
Kolu luhlu siza kuncoma eyona midlalo ilungileyo yokubaleka. Ngaba ezinye ziyamangalisa, Ngelixa abanye bephosa ngakumbi kukuzonwabisa kwaye kunjalo, abanye abafikayo abasandula ukuseta ibha ephezulu kakhulu kulongezo lwexesha elizayo kwivenkile yomdlalo we-Android. Ziphose kuyo.
2 I-Asphalt 9: Iintsomi 2019
3 I-GRID Autosport
4 Beach inqwelwana Racing
5 Izivili eziShushu ezingapheliyo
6 UMfu weeNtloko zeRally
7 Umphathi weMotorsport Iselfowuni 3
8 Isidingo seSantya: NL Las Carreras
11 Ukungcola kweRally Racer
13 Amavili ashushu: Race off
14 Umzila wezoKhuselo weNtaba ye-2
15 Umdyarho weBuggy racing 2
Sitshisa umlilo wokuqala ngeMario Kart Tour. Umdlalo omtsha weNintendo oya kuthi malunga neveki ikwazile ukulawula iimiliyoni zokukhutshelwa kwaye ube ngomnye wemidlalo edlalwe kakhulu kwi-Android. Izisa yonke into ebonakalise inkampani yomdlalo wevidiyo waseJapan kwaye iphumelele kule minyaka idlulileyo ukuba ibe yenye yeempawu kumzi-mveliso.
Akukho kunqongophala koonobumba njengophawu lomfanekiso njengoMario ngokwakhe kunye neendlela ezahlukeneyo zokukhetha ukuba nezithuthi ezingcono. Ukuqwalaselwa kwiisekethe ezisizisela iinkumbulo ezintle kakhulu kwiinguqulelo zekhonsoli kunye nemowudi yabadlali abaninzi ekulindelwe ukuba iza kuwa njengoko uNintendo uqobo walumkisa kutshanje. Umdlalo omdyarho omkhulu ngayo yonke loo nto yokubamba iNintendo arcade.
I-Asphalt 9: Iintsomi 2019
Umdlalo wokubaleka ohamba ngendlela eyahlukileyo kwaye ohluke kakhulu kunangaphambili ngokwenyani yemizobo yayo kunye nethoni "enzulu" ngakumbi. Nangona ungomnye umdlalo okwaziyo ukukubamba ngezo mzobo mhle kwaye uzive iinjini zigquma kuwo onke amanyathelo. Ukuba kuMario Kart siqokelela abalinganiswa beNintendo, apha siza kuba neempawu ezinje ngeFerrari, iPorsche okanye iLamborghini ezandleni zethu.
Iisekethe kunye neendawo zezinye zezinto ezigqwesileyo kumdlalo onuka ipetroli kunye nokuqhuba okwenyani; nangona kamva ingekuko ukulinganisa okuyinyani esiya kukufumana kwisihloko esiza kulandela.
Ngokulula ngowona mdlalo wokubaleka ungcono ngoku kwi-Android. Ngumdlalo weprimiyamu ngokungafaniyo noninzi kolu luhlu, kodwa nge € 10,99 uya kuba nawo wonke umxholo wayo wentlawulo. Ngamanye amagama, awuzukulinda ukuba uvavanye nganye yeemoto zayo ezili-100 kwaye uqhube ngeendlela ezili-100 ezinikezelwe ngokugqibeleleyo ukuziva ukuba isithuthi ngasinye sinendlela yaso eyodwa yokuqhuba. Ngokubonakalayo kuyamangalisa kwaye uya kuba nakho ukuqhuba kweemoto ezintle kakhulu emhlabeni.
Unokukhuphisana kukhuphiswano lokuhlala abantu-bodwa, iswitch, ukhenketho lweemoto, unyamezelo, ukudiliza, ukukhukhumala, ukukhawulezisa kunye nedolophu. Ewe kunjalo, ifuna umatshini olungileyo ukuze iselfowuni yakho itsale i-turbo kwaye ezo mbhobho zokukhupha zivakale ngendlela engazange ibekho ngaphambili. Okona kulungileyo kuluhlu kwaye kutshanje kukhutshwe kwi-Android (kwiiveki ezidlulileyo).
GRID ™ Ukuzenzekelayo
Umthuthukisi: Feral Interactive
ixabiso: € 10,99
Beach inqwelwana Racing
Isihloko ebesikwi-Android iminyaka, kodwa asinakushiya kolu luhlu lweyona midlalo mihle kakhulu yokubaleka. Njengoko igama libonisa, ngumdlalo wokubaleka iseti kwezo buggies zaselwandle. Ukuba kuye kwafuneka simbeke kudidi, ukufuphi kuMario Kart kunangaphambili. Nangona kwinqanaba lobuchwephesha ewadlala kakuhle amakhadi akhe.
Ineengoma ezili-15, iintlobo ngeentlobo zamandla okulwa neentshaba zakho ukuze zibe nexesha elinzima kwaye inabadlali abaninzi abaza kukwenza ukuba udlale imidlalo kunye nabahlobo abayi-4. Umdlalo olungileyo wokubaleka kunye neqela lakhe labalandeli kwaye sikwi-2019.
Umthuthukisi: Icandelo leVector
Izivili eziShushu ezingapheliyo
Intsha ephuma ehovini kwaye izisa nayo yonke into ebonakalise iithoyi zikaMatel. Inkqubo ye- Amavili ashushu apha aguqulwa abe ngumdlalo wokubaleka apho kukho ukubukeka kokutsala i-nitros kunye nokulahla abachasi bakho. Umdlalo womdyarho osetyenzwe kakuhle ngokubonakalayo kwaye unikezela ngeemvakalelo ezinkulu ezinxulumene nesantya.
Inemidyarho ngexesha lokwenyani ngokuchasene nabanye abadlali abasi-8 kunye nothotho lweesekethe ukuze undwendwele iindawo ezithile ezaziwa kakhulu kwizixeko ezinjengeNew York okanye iLondon. Isihloko esikwenza uzive ukuba uhlala ufuna ntoni kula mavili ashushu kwaye ufuna neselfowuni elungileyo ukuba uyonwabele ngokupheleleyo.
Umthuthukisi: Imidlalo yokuHamba ngeSelfowuni
UMfu weeNtloko zeRally
Ayisiyoyona midlalo ibalaseleyo kolu luhlu, kodwa inokufumaneka ngesizathu esilula: ivumela imidlalo yendawo kwi-WiFi nabahlobo. Oko kukuthi, ukuba ufumana uninzi loogxa bakho ekhaya ngemini enethayo, ungatsala esi sihloko ukuba uqhushumbe ngelixa uziluma ngemidlalo yabo yabadlali abaninzi.
Sinemixholo emi-3, iingoma ezili-18, iiglasi eziyi-24 ezisemgangathweni, imo yobuhlanga engathandabuzekiyo, iifoto ezi-7 ezixhaswayo, iimoto ezingama-30 zokuphucula, abalinganiswa abayi-18 booNtloko kunye ne-WiFi yabadlali abaninzi ebandakanyekayo. Ngokubonakalayo inekhathuni kunye nokuKhangela kweBuggy Beach, kodwa oko akuthethi ukuba inika ulwazelelo oluhle kakhulu kunye nezo zilindelweyo xa zilwayo xa sithetha ngomdlalo wabadlali abaninzi balapha.
Umthuthukisi: Spunge Imidlalo Pty Ltd
Umphathi weMotorsport Iselfowuni 3
Ngumdlalo wokulinganisa ohamba kancinci kuluhlu, kodwa kuba ikukungafaniyo okuhlangabezana nomgaqo kwaye ngumdlalo, siwubeka kuluhlu. Apha uza kuqhuba lonke ulawulo lweqela leFomula 1 kwaye yenza izigqibo kugqatso kunye nabaqhubi bakho ababini bezama ukufikelela kumgca wokugqibela eyokuqala. Zilungiselele ukuthatha isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwamavili abaza kuwakhwela ekuqaleni kwaye uthathe isigqibo sokuba bazokungena nini paddock ukuwatshintsha.
Omnye weyona midlalo ilungileyo yokulinganisa kwaye nangona singazukukhuphisana nabanye abadlali, uya kuziva ngokwakho ukuba kuya kuba yintoni na kuFormu 1. Qwalasela indlela ekufuneka uziphucule ngayo izithuthi zeqela lakho kwaye uza kuba njani ukuqesha injineli kunye nabaqhubi beenqwelomoya abaninzi. Umdlalo omangalisayo osekwe kwipremiyamu ukuba ube nawo wonke umxholo wentlawulo.
Umthuthukisi: Imidlalo yePlopsport
ixabiso: € 6,99
Isidingo seSantya: NL Las Carreras
UbuGcisa be-elektroniki busizisela oku umdlalo omkhulu wokubaleka usuka kwenye yezona zibaluleke kakhulu zohlobo oluthile njengoko kufuneka iSantya. Inayo yonke into eyenze ukuba uthotho lwemidlalo yokubaleka ithandwe yimizobo emangalisayo, lonke uxinzelelo lokulwa ngokuchasene nabanye abadlali kunye neemeko ezizizo apho unokuziva ngathi uhamba "ngokubhabha" endleleni.
Ineempawu ezibaluleke kakhulu kwihlabathi lezithuthi kwaye ukuba, kuba ngumdlalo we-freemium, ngamanye amaxesha kuya kufuneka utsale ii-micropayments okanye umonde wakho ongcwele ukuze ufumane umxholo ongaphezulu ngokutshintshiselana nexesha lakho. Iwela ngasemva kweGRID enkulu esungulwe kwiintsuku ezidlulileyo, kodwa yenye yemidlalo yokubaleka yokudlala ewe okanye ewe kwiselfowuni yakho ye-Android.
Umdyarho we-CSR 2 ngumdlalo wokubaleka kodwa nge umhlakulo phakathi kwabadlali aba-2. Kukukhawulezisa ngexesha elifanelekileyo kunye nokutshintsha kwegiya phambi komchasi wakho. Umbono uphantse ube mva kwaye uya kukuvumela ukuba ubone ukuba uhamba njani. Awuyi kuqhuba imoto yakho yezemidlalo ngokuthe ngqo, kodwa uza kuba nenani elikhulu lomxholo wokuphucula izithuthi zakho, uthenge ezintsha kwaye uqhubeke ngokuqhubela phambili ngokufanelekileyo.
Ewe, iintlobo ezahlukeneyo zeemodeli onokuzikhetha yenye yeempawu zayo. Kwaye lolunye uhlobo njengomdlalo wokubaleka, nangona ezinye iimvakalelo kunye neenjongo. Apha kuya kufuneka ucofe iqhosha lokutshintsha iigesi kumzuzu olungileyo ukuze ufikelele kwinjongo ngaphambi kwemoto oye wangqubeka ngayo. Ngokuzoba kukuzonwabisa, ke sele uyazi into ekulindeleyo.
Umthuthukisi: I-NaturalMotionGames Ltd
Inye yeyona midlalo indala kuluhlu, kodwa ikwimo entle. Kudala-dala, wawungenakukhetha ukudlala abadlali abaninzi ngexesha lokwenyani kwaye wabaleka ngokuchasene nekopi yabanye abadlali abalawulwa bubukrelekrele bokuzenzela.
Ngethamsanqa, yahlaziywa ngemowudi yabadlali abaninzi ekuvumela ukuba ulume ngokuchasene nabanye abadlali abasi-7 kwimidlalo yexesha lokwenyani kwaye ibeka isibonda esikhulu kuyo. Ngapha koko, uhlaziyo lomxholo kunye nokwandiswa okukhulu kuye kwavumela ukuba ibe yenye yezona zidlalwe kakhulu kwaye zibenamanqaku aphezulu. Ngowona mzekelo wokugqibela wokuba umdlalo ungabonakala eluntwini iminyaka yonke ukuba ihlaziywa ngomxholo omtsha kunye neemowudi ezininzi. Kwakhona ubuGcisa boBugcisa benza into yayo.
Ukungcola kweRally Racer
Siya kwindibano kwaye Imo yomntu wokuqala ukonwabela ideshibhodi yemoto yethu yirali. Lo mdlalo usizisa kwisakhono sokwazi ukuba sithatha njani iirveve ukuze ii-skids zethu zeemoto kwaye siyazi ukuba sizithatha njani ngcono kunabanye abachasi. Inemowudi yabadlali abaninzi ngexesha lokwenyani ukuze ukwazi ukuluma ungene kwabanye ukuze uve ulonwabo lokuqengqeleka eludakeni nakumdaka. Yilungele ukuqhuba kuzo zonke iintlobo zeesekethe kwaye uyazi nganye yeendlela ezi-5 ezinikezelwa sesi sihloko simahla.
Umthuthukisi: Imidlalo ye-SBK
Ukuba i-GRID yeyona midlalo ilungileyo yokubaleka kuluhlu, Rush Rally 3 yeyona ndibano ilungileyo. Yeyona simulator yokwenyani eya kuthi ngokwenyani ikwenze uzive uqhuba kwiimeko ezimbi kakhulu nakwiisekethe apho kuya kufuneka uyazi ukuba ulungelelanisa njani ivili lokuqhuba kakuhle ukulawula i-physics yesithuthi sakho xa usikona.
Ngumdlalo wemoto okwenyani onamanqanaba angaphezulu kwama-72 kunye nazo zonke iintlobo zomhlaba apho ubonakalisa khona izakhono zakho zokuqhuba ezifana nekhephu, igrabile, i-asphalt okanye udaka. Ikwabandakanya ukuguqulwa kwezithuthi ngexesha lokwenyani kwaye konke oku kuphuhliswe liqela esele lineminyaka eli-15 yamava kolu hlobo lwee-simulators. Akukho kunqongophala kwemowudi yexesha lokwenyani yabadlali abaninzi kwaye i-4,99 yayo yexabiso ixabisa i-euro nganye oza kuyichitha. Enye yezona zinto zibalulekileyo ukuba ufuna ngokwenene umdlalo wokubaleka. Umangalisayo.
Umthuthukisi: IBrownmonster limited
ixabiso: € 5,49
Amavili ashushu: Race off
Sibuyele kwiivili ezishushu, kodwa apha ngokwembono: icala. Uya kuba nayo mahala, kwaye ube nomonde kunye nexesha, ukukwazi ukufikelela ngaphezulu kwezithuthi ezingama-30 ngaphezu kweengoma ezingama-40 kunye nefiziksi ethile ephambeneyo. Alukho olunye ukhetho ngaphandle kokwazi ukuba sikumdlalo we-arcade ngakumbi kwaye lolona ngumahluko kwiRush Rally 3 yangaphambili.
Ngomnye wale midlalo yokuqhuba ukonwaba kwaye ngaphandle kweengxaki ezininzi, nangona oko kungathethi ukuba ungayidlala iiveki ezininzi. Ngokuzoba inezinto zayo kwaye iya kufuna iselfowuni ukuba iyibone ngeyona ndlela ifanelekileyo.
Umthuthukisi: Imidlalo yeHutch
Umzila wezoKhuselo weNtaba ye-2
Inye yeyona midlalo mihle kakhulu yokubaleka kuluhlu ngaphandle kweMario Kart Tour. Sele ikwiVenkile yokuDlala iminyaka, kodwa le nto ikwazile ukuba nenqwaba yabadlali abaqhubeka bayidlale enkosi kuhlaziyo olunomxholo omtsha. Sikwityala elifana kakhulu noMdyarho wenene 3 kubuGcisa be-Elektroniki kwaye ekuhambeni kwexesha kuye kwaphucula kakhulu. Kufuneka ujonge inani elikhulu lokuphononongwa kunye nenqaku eliphakathi.
Nangona ingenabo abadlali bexesha lokwenyani, iyakuvumela ukuba uzive ngathi udlala nabanye abadlali (kulungile, iikopi zabo). Ukuqwalaselwa kwiisekethe kunye nokulutha okuthetha ukuphucula imoto yakho ukuze ufumane iingqekembe ezingaphezulu kwaye ke uthenge abanye ngobuchule obungcono. Ngumdlalo one-essence yawo kwaye ungawudlala ukusuka kumzuzu wokuqala.
Umdyarho weBuggy racing 2
La Umdyarho weeBuggy zeBhitshi Icandelo lesiBini lizisa into eyenze ukuba idume kuqala yesaga, kodwa enegrafikhi ehlaziyiweyo. Ukuba uMario Kart Tour ukude kakhulu kuwe, mhlawumbi iikarts zesi sihloko sitsha se-Android sinokukutsala ngakumbi. Ngethoni enkulu ye-arcade, unokufikelela ngaphezulu kwamandla angama-45, ngaphezulu kwezithuthi ezingama-40 kunye nefiziksi yento eyenza ukuba imidlalo yakho inike umdla.
Ayinabadlali abaninzi ngexesha lokwenyani, kodwa ihambisa amandla amakhulu kwimisebenzi yayo ukuze sibe nexesha elimnandi. Nangona ingenabo abadlali abaninzi, unokuthembela kwikopi yabanye abadlali kwaye ubuncinci busenza sizive ngathi asisodwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » Imidlalo ye-Android » Eyona midlalo mihle yokubaleka ye-Android
I-DAZN: Iyintoni, ikhathalogu kwaye loluphi uluvo olukufaneleyo kuthi
Ungayifumana njani kwakhona imiyalezo ecinyiweyo kuWhatsApp kudala